Izinwele Umbala ngemibala egqamile ungalokothi emfashinini. White owesifazane zibukeke abasha nobuso okuqabulayo kakhulu. Ngakho-ke wochwepheshe unyaka ngamunye ekuthuthukiseni shades omusha ongase kufanele sibe nesithakazelo blondes. Omunye izixazululo yasekuqaleni kakhulu, okuyinto mkhuba kule sizini, imele ezimhlophe nge tinge pink.
Umbala omhlophe nge pink amathoni - inguqulo nemfashini we udayi izinwele, esibonakala by ichaza ukushintsha kombala curls nge ukudalwa 'emtoti' sitrobheli tint. Akukhona obomvu noma izinwele pink. Lapha isicelo izixazululo ezenza peach amathoni ukudala umuzwa ezithambile ngokubomvu ufasimbe curls.
ezimhlophe Pink sifana Ingaphandle akuyona yonke intombazane. Hue efunwa kakhulu. Ngakho-ke, kwezinye izimo, ungakwazi kuphela agcizelele ukushiyeka ingaphandle bese wengeza umfanekiso vulgarity.
Ake sibone, oyoba ukubhekana ezimhlophe pink:
Ukuze umbala sici ithoni efudumele, okuyinto organically sibheke isizinda obucayi isikhumba pink. Ngesikhathi esifanayo uma ungeza onsomi umbala ithoni kungenziwa ingashintshwa ukuze Ingaphandle sabesifazane abangakaze abandayo okhanyayo ngebala lesikhumba.
Imibono ukusetshenziswa okuhle kakhulu abanesikhumba esimhlophe wobulili bubuhle. On uhlobo ladies ezishukiwe futhi abanebala elinsundu umbala uyobheka engenangqondo iyahlekisa.
Pink ngokuvumelana ezimhlophe ngamehlo ogqamile, gray kanye blue shades.
Ayegcwele pink umbala amasudi amantombazane izici inexpressive.
Ithoni pink blonde
Ngoba isici imfashini umbala ezihlukahlukene umbala umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Kuye inani ukwakheka kombala obomvu lichaza ekwakheni ingatholakala ngaphezulu abandayo color pink noma shades ukuthi asikhumbuza sitrobheli ice cream. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, isicelo imibono toning ezimhloshana ukhiqiza yalokho ehlukile ngempela futhi okumnandi.
Le formula for blonde pink
Njengesisekelo ukugcwaliseka umbala yokuqala base upende kuthatha okumsulwa umthunzi blonde. Njengoba isakhi obhekene kumiswa pink amathoni, inhlanganisela zegolide mikstona onsomi. ejenti toning kunezelwa nengcosana. ivolumu yabo lichaza ekwakheni udayi incike ofiselekayo umbala umfutho.
Ukuze izinwele ezinemibala engakutholi onsomi kakhulu, mikstona segolide Kunconywa ukwengeza kancane xaxa. Uma udinga ukusebenzisa shades olufudumele we kunesidingo engeza amaconsi ambalwa mikstona abomvu.
Ngezinye Umbala izinwele ngendlela blonde pink has ezithile ezingathandeki sobala. umehluko wemisindo nemiqondo yamagama anjalo ngokushesha impela ulahlekelwe imiva yabo kusukela leaching sombala. Ngakho-ke, la mantombazane abaphendukela izixazululo ezinjalo, kubalulekile ukuba njalo ukubuyekeza umbala, Tinting izinwele cishe njalo ngemva kwamasonto amabili.
Ukuze silondoloze imibala yoqobo idinga ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo zokuthola imibala. Ngakho-ke, ukugcina isithombe kudinga izimali sasivumela umxhwele.
Namuhla eseqedile ukwakhiwa zingatholakala ezitolo ukudayisa izimonyo professional izinwele Umbala ezihlukahlukene shades of blonde pink. Ifanele zindlela ukwenza lo msebenzi ekhaya.
Ngokuqondene nokuhambela ngenjongo salon, lapho amakhosi aye ayisebenzisa kaningi self-ukwakheka Ukwakheka udayi, okuvumela hit kakhulu ngokunembile umbala olufana ukubukeka izici zobuso nezifiso yekhasimende. Kuze kube yimanje, i-wochwepheshe aye ayisebenzisa kaningi eyiqonda udayi ukuxuba futhi mikstonov. Olinganise ngqo yezingxenye ukudala colorists professional amathoni ezithile kuphela zaziwa. Ngakho-ke, ngenxa Umbala izinwele ezimhlophe e pink ekhaya akufanele asebenzise ukusetshenziswa ukwakhiwa ngomumo eyenziwe.
Yini kwekhanda kuyoba ephelele ubuso okusaqanda - enye yezinkinga kunazo ukuphokophela
Ziyini ama-antibiotics kubantu abadala nabantwana?
Ukusongela isisu: izimbangela, izimpawu kanye nezici zokwelapha